» गाला राउण्डका उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरु, भाग–१
गाला राउण्डका उत्कृष्ट ६ प्रतियोगीहरु, भाग–१
११ माघ २०७६, शनिबार १२:५५
मकवानपुर, ११ माघ । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो नेपाल आईडलमा अहिले गाला राउण्ड चलिरहेको छ । गाला राउण्डमा पुग्ने बित्तिकै प्रतियोगिता थप रोमाञ्चक भएको छ । बिहीबार प्रसारण भएको एपिसोडमा उत्कृष्ट १२ मध्ये ६ जनाले प्रस्तुति दिएका छन् । बिहीबार स्वस्तिका ढकाल, रचना रिमाल, प्रविण बेड्वाल, कमल शोव, सज्जा चौलागाईँ र ममता गुरुङले प्रस्तुति दिएका थिए । बिहीबारको एपिसोडमा दमदार प्रस्तुति दिएर प्रविन बेड्वालले ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका छन् । यस भिडियो सामग्रीमा बिहीबार प्रस्तुति दिएका ६ जना प्रतियोगीहरु र उनीहरुको प्रस्तुतिका बारेमा चर्चा गरिएको छ । हेरौँ भिडियो–
बिहीबारको पहिलो प्रस्तुति मकवानपुरको हेटौँडा निवासी स्वस्तिका ढकालले दिएकी थिईन् । स्वस्तिकाले रिमा गुरुङ होडाको आवाजमा रहेको ‘फर्केर लिन आएनौँ’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् । कार्यक्रमका विशेष अतिथि जेम्स प्रधानले उनको आवाजको तारिफ गरे । आफ्नो कम्पोजमा गीत गाउन स्टुडियोसम्म लिएर जान रहर लागेको समेत उनले बताए । निर्णायक कालीप्रसाद बास्कोटाले स्वस्तिकाको प्रस्तुति पश्चात दंग परेको र पहिलेको उत्कृष्ट प्रस्तुति जस्तो नभएको बताए । निर्णायक ईन्दिरा जोशीले पहिलेको तुलनामा कम भएता पनि निकै राम्रो भएको बताए । निर्णायक न्ह्यु बज्राचार्यले स्वस्तिकामा ठहरापको राम्रो ज्ञान भएको बताए । स्वस्तिकाको भोटिङ कोड एनआई १२ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७१२ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट एउटा फ्री भोटका साथै तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । ईसेवा, जेआरएफ, स्टाररेमिट, जी मनी ट्रान्स र ईन्ईन्टाईभ रेमिट मोबाईल एपबाट पनि उनलाई एकैपटक भोट गर्न सकिन्छ । नेपाल आईडल सिजन ३ मा मेलोडियस प्रस्तुति दिएर अघि बढेकी प्रतियोगी हुन् स्वस्तिका ढकाल । मकवानपुरको हेटौँडा ८ कमाने निवासी स्वस्तिकाले सुमधुर आवाजमा निर्णायक र दर्शकको मन जित्न सफल भएकी छिन् । उनी यस अघि सिजन २ मा पनि उत्कृष्ट २० सम्म पुग्न सफल भएकी थिईन् । उनी २३ वर्षकी छिन् ।
बिहिबारको दोस्रो प्रस्तुति झापाको भद्रपुर निवासी रचना रिमालले दिएकी थिईन् । उनले साधना सर्गमको आवाजमा रहेको ‘कसरी भनुँ म’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् । अघिपछि स्टेजमा निकै डराउने रचनाले यो पटक भने नाच्दै प्रस्तुति दिएकी थिईन् । निर्णायक ईन्दिरा जोशीले उनको प्रस्तुति र आवाजमा युनिकनेस भएको बताईन् । कार्यक्रमका विशेष अतिथि जेम्स प्रधानले प्रस्तुति निकै राम्रो भएको बताए । त्यस्तै निर्णायक न्ह्यु बज्राचार्य र कालिप्रसाद बास्कोटाले कन्फिडेन्टका साथ प्रस्तुति दिएकोमा रचनाको तारिफ गरे । उनको आवाजमा पोलिस हुन बाँकी रहेको निर्णायक कालिप्रसादले बताए । रचनाको भोटिङ कोड एनआई १० हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७१० डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट एउटा फ्री भोटका साथै तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । ईसेवा, जेआरएफ, स्टाररेमिट, जी मनी ट्रान्स र ईन्ईन्टाईभ रेमिट मोबाईल एपबाट पनि उनलाई एकैपटक भोट गर्न सकिन्छ । नेपाल आईडल सिजन ३ मा आफ्नो गायन कला प्रस्तुत गरिरहेकी सुमधुर आवाजकी धनी रचना झापाको भद्रपुर निवासी हुन् । उनी १७ वर्षकी छिन् । कक्षा ११ मा अध्ययनरत रचनाले सानै उमेरमा संघर्ष गर्न सिकेकी छिन् । मिठो चटपटे बनाउने रचनालाई भद्रपुरमा धेरैले चटपटेवाली भनेर चिन्छन् । विद्यालयमा पढ्दाको समयमा नै गायन प्रतियोगिताहरुमा भाग लिने गरेकी रचनाले गायन प्रतियोगिताबाटै हार्मोनियम पनि जित्न सफल भएकी थिईन् । सबैले चटपटेवाली भनेर चिनेता पनि उनी आफ्नै नामले चिनिन चाहान्छिन् । निर्णायक न्ह्यु बज्रचार्य उनको घरमै उनको आवाज सुन्न पुगेका थिए ।
बिहिबारको तेस्रो प्रस्तुति बर्दिबासका प्रविण बेड्वालले दिएका थिए । प्रविणले दिएको प्रस्तुति नेपाल आईडल सिजन ३ को ऐतिहासिक प्रस्तुति सावित भयो किनभने उनको प्रस्तुतिमा विशेष अतिथि सहित तिनैजना निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिएका थिए । उनको प्रस्तुतिमा दर्शक तथा सहभागीहरुले समेत उठेर सम्मान प्रदान गरेका थिए । नरेन्द्र प्यासीको आवाजमा रहेको ‘के भुल भयो प्रिया’ बोलको गीत गाएका उनले ‘कोकाकोला अपलिफ्टीङ पर्फोमेन्स अफ द डे’ को अवार्ड समेत जितेका छन् । अवार्डसँगै उनले नगद २० हजार रुपैयाँ पुरस्कार समेत प्राप्त गरेका छन् । उनको रेस्पेक्टेड पर्फोमेन्समा सबैले प्रशंसा गरे । निर्णायक ईन्दिरा जोशीले उनको खुलेर प्रशंसा गर्दै पावरफुल आवाजका साथ सबै हर्कतहरुले मन छोएको बताईन् । अर्का निर्णायक कालिप्रसाद बास्कोटा उनको आवाजको फिदा नै भए । उनले भने –‘जेनेरल्ली आफ्नो अगाडि कुनै उस्तादले गाईरहनुभएको छ भने कमेन्ट गरिँदैन, जस्ट सुनिन्छ र लष्ट भईन्छ ।’ उनले प्रविणलाई सम्मान सहित स्टाण्डिङ अवेशन दिए अनि निर्णायक ईन्दिरा जोशी पनि उठिन् । कालिप्रसाद बास्कोटाले सम्मान पूर्वक उनलाई अभिवादन गरे अनि प्रविण पनि सम्मान सहित झुके । विशेष अतिथि जेम्स प्रधानले यस्ता प्रस्तुतिहरु हत्तपत्त सुन्न र हेर्न नपाईने बताए । आफ्नो सो दिन पनि निकै रमाईलो भएको भन्दै उनले प्रविणको प्रशंसा गरे । निर्णायक न्ह्यु बज्राचार्यले उनको हर्कत र कामहरुको प्रशंसा गर्दै यस सिजनमा फिमेलले जित्ला जस्तो लागेता पनि प्रविणको आवाजसँग सबै जना डराउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । त्यसपछि उनले ‘प्रविणको लागि सबै उठीदिउँ’ भन्दै सम्मान गरे । यो नै सिजन ३ को गाला राउण्डमा पहिलो रेष्पेक्ट पर्फोमेन्स बन्न सफल भयो । यसरी प्रविणले गाला राउण्डमा तहल्का मच्चाए ।
प्रविणको भोटिङ कोड एनआई ०९ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०९ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट एउटा फ्री भोटका साथै तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । ईसेवा, जेआरएफ, स्टाररेमिट, जी मनी ट्रान्स र ईन्ईन्टाईभ रेमिट मोबाईल एपबाट पनि उनलाई एकैपटक भोट गर्न सकिन्छ । नेपाल आईडल सिजन ३ मा सुमधुर आवाजका कारण चिनिएका प्रविणले यसअघि पनि आफ्नो प्रस्तुतिमा तहल्का मच्चाएका छन् । सुमधुर आवाजले दर्शकको मन जित्न सफल प्रविण चितवन निवासी हुन् । उनी २३ वर्षका छन् । उनी बुटवल अडिसनबाट छानिएका हुन् । उनले सँगीत विषयमा नै स्नातक गरेका छन् ।
बिहिबारको चौथो प्रस्तुति कैलालीका कमल शोबले दिएका थिए । दिप श्रेष्ठको आवाजमा रहेको ‘मेरो आँखामा’ बोलको गीत गाएका कमलले निर्णायकको प्रशंसा पाए । निर्णायक ईन्दिरा जोशीले कमलको लोअर नोटमा थोरै समस्या भएको भएता पनि सबै कुरा राम्रो रहेको बताए । निर्णायक न्ह्यु बज्राचार्यले उनले प्रस्तुत गरेको गीत धेरै सुनेको कारण अझै थप अपेक्षा भएको बताए । विशेष अतिथि जेम्स प्रधानले उनको टोनको तारिफ गरेभने निर्णायक कालिप्रसाद बास्कोटाले कमलको आवाज र ठहराप सबै राम्रो लागेको बताए । कमलको भोटिङ कोड एनआई ०१ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०१ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट एउटा फ्री भोटका साथै तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । ईसेवा, जेआरएफ, स्टाररेमिट, जी मनी ट्रान्स र ईन्ईन्टाईभ रेमिट मोबाईल एपबाट पनि उनलाई एकैपटक भोट गर्न सकिन्छ । नेपाल आईडल सिजन ३ मा दमदार प्रस्तुति दिएर चर्चामा आएका कमल धनगढी निवासी हुन् । उनी २० वर्षका छन् । सानैदेखि संगीतमा रुचि राख्ने कमल कुनै समय ब्याण्डमा समेत आवद्ध थिए । उनी ब्याण्डसँगै प्रस्तुति दिन्थे । ब्याण्डमा नै उनले सँगीत सिकेका हुन् । ब्याण्डमा रिदम गितारिष्ट र भोकलिष्ट भएर काम गरेका कमलले औपचारिक रुपमा भोकल क्लास भने लिएका छैनन् । गीतार सिकेका कमल संगीतलाई निकै महत्व दिन्छन् । उनले नेपालगञ्ज अडिसनबाट बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड पनि जितेका थिए ।
बिहिबारको पाँचौँ प्रस्तुति मोरङकी सज्जा चौलागाईले दिएकी थिईन् । उनले सुगम पोखरेलको आवाजमा रहेको ‘जाँदै छु टाढा’ बोलको गीत प्रस्तुत गरेकी थिईन् । निकै नै दमदार प्रस्तुति दिएका सज्जाको पर्फोमेन्सलाई तिनै जना निर्णायकहरुले स्टाण्डिङ अवेशन दिए । गाला राउण्डमा सज्जाको प्रस्तुति दोस्रो रेस्पेक्ट प्रस्तुति बन्न सफल भयो । सज्जाको भोटिङ कोड एनआई ११ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७११ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट एउटा फ्री भोटका साथै तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । ईसेवा, जेआरएफ, स्टाररेमिट, जी मनी ट्रान्स र ईन्ईन्टाईभ रेमिट मोबाईल एपबाट पनि उनलाई एकैपटक भोट गर्न सकिन्छ । नेपाल आईडलमा रक स्टारको छवि बनाएकी सज्जा मोरङ निवासी हुन् । उनी २२ वर्षकी छिन् । उनी अहिले काठमाठौँ नारायणटारमा बसोबास गर्दै छिन् । साँगितिक दुनियाँमा ६ वर्षदेखि संघर्षरत सज्जा रेष्टुरेन्टहरुमा समेत गीगहरु गाउँछिन् । आमा वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा साईप्रास गएपछि सज्जाले भाईको जिम्मेवारी समेत बहन गर्दै आएकी छिन् । बुवा गाउँमा भएका कारण भाईका लागि आवश्यक सबै कुराको जोहो गर्न उनी संघर्षरत छिन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि आवेदन समेत दिएर बसेकी सज्जा एसएलसी पश्चात नै ब्याण्डमा जोडिएकी थिईन् । ‘द लोडिङ ब्याण्ड’ मा आवद्ध उनलाई ब्याण्ड मेम्बरहरुले साँगितिक करियर निर्माणकालागि निकै सहयोग गरेका छन् । उनले काठमाडौँ अडिसन र थिएटर राउण्डको बेस क्याम्पबाट ‘बर्जर ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे’ जित्न सफल भएकी थिईन् ।
बिहिबारको छैटौँ तथा अन्तिम प्रस्तुति पोखराकी ममता गुरुङले दिएकी थिईन् । उनले आस्था तामाङ मास्केको आवाजमा रहेको ‘गट अबि लभ’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । प्राय आधुनिक गीत गाउने गरेकी ममताको रकस्टार छविले निर्णायकहरुको मन जित्न सफल भएको थियो । सबै निर्णायकहरुले उनको प्रस्तुति राम्रो भएको बताए । ममताको भोटिङ कोड एनआई ०४ हो । उनलाई भोट गर्नका लागि नेपालबाट उनको भोटिङ कोड लेखेर एनटिसी, स्मार्ट सेल र एनसेलबाट ३७००० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । त्यस्तै १६६६७७०४ डायल गरेर उनलाई भोट गर्न सकिन्छ भने भारतबाट भोडाफोन मापःर्mत ५३०१० मा, कतारबाट ओरेडुमार्फत ९२३०० र मलेसियाबाट अल टेलिकोसमार्फत ३३३१० मा म्यासेज गर्न सकिन्छ । उनलाई रेस्पेक्ट एण्ड राईज एपबाट एउटा फ्री भोटका साथै तपाईले चाहानुभएको जति रकमको प्याकेज भोट एकैपटक गर्न सकिन्छ । ईसेवा, जेआरएफ, स्टाररेमिट, जी मनी ट्रान्स र ईन्ईन्टाईभ रेमिट मोबाईल एपबाट पनि उनलाई एकैपटक भोट गर्न सकिन्छ । नेपाल आईडल सिजन ३ को मञ्चमा सबैको मन जित्न सफल अर्की ममता पोखरा निवासी हुन् । उनी १७ वर्षकी छिन् । । रेडियो साराङकोटमा रेडियो जक्कीका रुपमा कार्यरत ममताले सानैदेखि बुवासँग संगीत सिकेकी हुन् । संगीत क्षेत्रमा नै संघर्षरत बुवाको पदचाप पछ्याउँदै अघि बढेकी ममता आफ्नो आमाबुवाको सपना पुरा गर्न चाहान्छिन् । कारणवश संगीत क्षेत्र छोड्न बाध्य भएका आफ्ना बुवाको अधुरो सपना उनी पुरा गर्न चाहान्छिन् । बुवालाई बेस्ट फ्रेण्ड सम्झने ममता निरन्तर संगीतको शिखरतर्फ अग्रसर छिन् । आदरणिय दर्शकविन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा नेपाल आईडल सिजन ३ को विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।